लहान २७ साउन । सधैं लोडसेडिंग घटाउंने सूचना आउंछन् । तर, सेवाग्राही कहिले लोडसेडिंगबाट मुक्त पाउंदैन् । यसमा पनि यो प्रचण्ड गर्मीको समयमा राती नै विद्युत काटेर सेवाग्राहीलाई पीडा दिने गर्छन् । लोडसेडिंग घटाउंनुको साटो बढाउंने गरेकोले लहानका जनता आक्रोशित भएका छन् ।
करिब तीन दिनदेखि विद्युतको रवैयाले जनता सास्ती खेप्दै आएको छ । सेवाग्राहीले पीडा खेप्न नसकेर यत्तिबेला फेसबुक मार्फत लोडसेडिंग विरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । लहान ७ का राकेश गुप्ता रोशनले समाजिक संजाल फेसबुकमा लेख्छन् — लहानमा राती राती हुने अनावश्यक लोडसेडिंगको विरुद्धमा साउन २८ गते बेलुका ५ देखि ६ बजेको बीच विद्युत कार्यालय घेराउ कार्यक्रममा सहभागी बनौं भनी युवा नागरिक समाज लहानमार्फत आव्हान गरेका छन् ।
फेसबुकमा राकेश गुप्ताले लेखिएको स्टाटसमा दर्जनौले कमेन्ट गर्दै भने आन्दोलनको लागि हामी तयार छौं । कमेन्टमा राज शर्मा लेख्छन् —विद्युत कार्यालयले राती फोन समेत उठाउंदैन् । लोडसेडिंगबारे भनियो भने फोन नै काटिदिन्छ । लोडसेडिंगले सेवाग्राही मारमा छन् । यसमा पनि विद्युत प्राधिकरण लहान शाखामा सम्पर्क गर्दा फोन उठाउंने कर्मचारीहरुले उल्टो बांगो भाषा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
हिजो विहानको लोडसेडिंगको बेला ०३३५६०१०० मा फोन गरेर एक मिडियाकर्मी सोधे लाईन कति बेला आउंला ? लहान विद्युतका कर्मचारी फोनमै भने आठ घण्टा पछि ,बुझ्नु भएन राती आठ बजे मात्रै लाईन आउंने हो । त्यति भन्दै फोन काटियो । आठ घण्टा भनिएपनि आधा घण्टामै लाईन आयो । लामो लोडसेडिंगको कारण लहान स्थित रहेको रेडियो स्टेशन, अफसेट, कार्यालयहरु, कलकारखाना, उद्योगलगायत सबै प्रभावित भएको छ । इन्भटरको प्रयोग गर्नेले एक आध घण्टा लोडसेडिंगमा पनि काम गर्छन् । तर तीन घण्टाको लाईनले बैट्री नै फूल चार्ज नहुने भएकोले इन्भटर पनि काम गर्न छाडेको अधिकांशको जनगुनासो रहेको छ । यसमा पनि मजदुरी गरेर जीवन पाल्ने सिटी रिक्शावालहरुको विजोग नै छ । राती ८ घण्टासम्म चार्ज हुने रिक्शाको बैट्री ३ घण्टामा के नै होला ? आधा चार्जले रिक्शा चलाएर समस्या खेप्दै आएका छन् यहांका सिटी रिक्शावालहरु । लोडसेडिंगवारे लहान विद्युत प्राधिकरणका प्रमुखलाई सम्पर्क गर्दा फोन उठाउंनु हुन् ।